Wararka - Madadaalada hal abuurka ah ee dharka naqshadeynta dharka
Dib u dhiska dharka ayaa sidoo kale la dhihi karaa waa naqshadda labaad ee dharka dharka. Waxay loola jeedaa waxqabadka labaad ee maryaha dhammaaday iyadoo loo eegayo naqshadeynta loo baahan yahay inay soo saarto saameyn farshaxan oo cusub. Waa kordhinta fikirka naqshadeeyaha waana ikhtiraac aan la barbardhigi karin. Waxay ka dhigaysaa shaqada naqshadeeyaha mid gaar ah.
Hababka dharka dib u dhiska
Hababka ugu badan ee la isticmaalo ayaa ah: tolidda, xoqida, salaaxida, concave iyo convex, hollow-out, daabacaadda daabacaadda, iwm.
Tolliin hal abuur leh, oo leh qaab kala duwan oo dun ah, xarig, suun, xargo, xarig qurxin, dhejis ama tolmo macnihiisu yahay, oo lagu daray noocyo kala duwan oo ah shaqooyin hal abuur sare leh, sameysid iskuxirnaan iyo jajaban, isdabajoog, isdaba-joog, saameyn muuqaal ah oo kala duwan
Sargaalidda, isku dhafka midabada iyo qaabab kala duwan.
Sidoo kale loo yaqaan 'pleating, pleating' ayaa gaabin kara ama yareyn kara qaybta dheer iyo tan ballaaran ee dharka dharka, taasoo ka dhigeysa dharka mid aad u fiican oo qurux badan Dhanka kale, waxay sidoo kale ciyaar ku siin kartaa dharka iyo barnaamijyada astaamaha xarrago leh ee dharka, taas oo kaliya ka dhigaysa dharka mid raaxo leh oo ku habboon, laakiin sidoo kale waxay kordhisaa saameynta qurxinta.
Sababtoo ah waxay leedahay saameyn wax ku ool ah iyo mid qurxin leh, waxaa si aad ah loogu isticmaalay dharka dumarka ee nus-dabacsan iyo kuwa dabacsan, taas oo ka dhigaysa dharka mid macno leh oo noole ah.
Hollowing, oo ay ku jiraan hollowing, godka xardho, line saxan godan, kiish xardho, iwm
Naqshadeynta moodada, qaabka, dharka iyo teknolojiyadda ayaa ah cunsuryo muhiim ah, iyo naqshadeynta dharka labaad ayaa door muhiim ah ka ciyaara Gabal maro wanaagsan oo jirka ah, qaab aan kala sooc lahayn ayaa ah mood wanaagsan. Dharka ka dib naqshadeynta dugsiga sare ayaa la jaan qaadaya fikradda naqshadeeyaha, maxaa yeelay wuxuu horey u dhameystiray kalabar shaqada nashqadeynta dharka, sidoo kale wuxuu u keeni doonaa dhiirrigelin badan iyo xamaasad abuur leh naqshadeeyaha.